သင်ကာ့ လက်ရေး | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
သင်ကာ့ လက်ရေး	Posted by mm thinker on August 2, 2008
Posted in: Poem, Revolution.	Tagged: Poem.	1 Comment
မနေ့က ဆရာကြီးသိပ္ပံမောင်ဝရဲ့ အောက်စဖို့ဒ်သွား ခရီးသွားမှတ်တမ်းကို ဖတ်ရင်း တစ်နေရာမှာ သိပ္ပံမောင်ဝက အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ အကျော်အမော်တွေရဲ့ လက်ရေးစာမူတွေ စုထားနဲ့ နေရာကို သွားကြည့်တဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ်။ ဒါနဲ့ ငါ့ပင်ကိုယ်လက်ရေး (တမင်လုပ်မရေးတဲ့လက်ရေး) ရော ဘယ်လို နေလိမ့်မလဲလို့လိုက်ရှာတော့ ဟိုးအရင် ကဗျာစာမူကြမ်း လက်ရေးတွေတွေ သွားတွေ့တယ်။ စုတ်ပြတ်နေတာပါပဲ။ အရင် ဆောင်းပါးတွေရေးတုန်းကဆို အိသီရိကျော်ဆိုတဲ့ စာရိုက်တဲ့ ကောင်မလေးပဲ ကျနော့ လက်ရေးအထာကိုသိတယ်။ မှန်းတတ် ဖတ်တတ်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ကွန်ပျူတာထဲမှာ တိုက်ရိုက် စာရိုက်တော့ လက်ရေးနဲ့ မရေးဖြစ်တော့ဘူး။ ဖိုင်ထဲမှာ ဒီပို့စ်မတိုင်ခင် တင်ခဲ့တဲ့ “ပြောင်းပြန်စီးတဲ့နေ့”ကဗျာကို ဘာကြောင့်ရယ်တော့ မသိ လက်ရေးနဲ့ ကောက်ရေးထားတာကို တွေ့မိတယ်။ အဲဒါနဲ့ ကမ္ဘာမကျော်တဲ့ သင်ကာရဲ့ လက်ရေးစုတ်ကို ဟားရအောင် တင်လိုက်ပါတယ်။
← ပြောင်းပြန်စီးသောနေ့	ပုဂံနဲ့ ပုပ္ပားဇာတ်လိုက်များ →	One comment on “သင်ကာ့ လက်ရေး”
Anonymous on October 15, 2012 at 10:17 pm said: